Hutano, 01 Ndira 2018
Zvita 29, 2017
Vagari Vanosangana naMeya Manyenyeni Pamusoro peMvura ine Tsvina
Vagari ava vatakura mvura ine tsvina kuenda nayo kumusangano uyu iyo yavaratidza kuna meya weguta reHarare VaBenard Manyenyeni.
Mhirizhonga yeZvematongerwo eNyika Yokanganisa Kisimusi kuMarondera West
Vechidi vatatu vebato reMDC-T kuWard 10 kuMarondera West vanoti vakarwiswa vakakuvadzwa zvakaipa musi wezororo reKisimusi mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF.
Magweta Anoti Vanhu Vakawanda Vakatyorerwa Kodzero Dzavo Muna 2017
Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu vanoti vanhu vakatyorerwa kodzero zvakanyanya vakatiwo vanotarisira kuti mugore ra2018 hurumende itsva yaVaEmmerson Mnangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji.
Zvita 21, 2017
Zvinhu Zvodhurira Vakawanda Munyika
Mumwe mugari wemuHarare, VaGodknows Homwe, vati gore rino ranga rakavaomera zvikuru vakati izvi zvava kuwedzerwa nekukwira kwemitengo.
Zvita 19, 2017
Mabvuku neTafara Dzoshaya Mvura yeMupombi
Vagari vekuMabvuku neTafara vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya hany’a kwekanzuru yeHarare kuti igadzirise dambudziko ravo rekushaya mvura. Vagari vanoti kushaya mvura uku kuri kukonzera zvirwere zvemidumbu zvisingaperi.
Zvita 14, 2017
ZPP Yokurudzira Hurumende Kuferefeta Masoja Ari Kumbunyikidza Veruzhinji
Sangano reZimbabwe Peace Project, ZPP, rinoti riri kushushikana nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji nemauto.
Zvita 12, 2017
Vakaremara Vanoda Kuti Hurumende Ivape Bazi Ravo Vega
Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti vanoda kuti hurumende ivape bazi negurukota rakangomirira nyaya dzevakaremara bedzi nekuti vanoti vave nemakore akawanda hurumende isinganzwi kana kugadzirisa zvichemo zvavo.